By soniya on	 23rd September 2018 अन्तर्वार्ता, समाचार
सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने नेपाली अभिनेता अनमोल केसी के सोच्छन् ? स्टारडम मात्र उनका लागि प्राथमिक हो त ? मानवीय मूल्य र स्वतन्त्रता उनका प्रिय अवधारणा होइनन् ? स्टार हुँदा उनले के पाए, के गुमाए ? मिडिया र बजारले कसरी स्टार निर्माण गर्छ, यसतर्फ किन उनी सचेत छन् ? शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशित यस अन्तवार्ता अनिल यादवले लिएका हुन् । वस्तुपरक र सान्दर्भिक लागेर यहाँ पुनः प्रकाशन गरिएको छ ।
अँ, त्यस्तै भयो । दुई–तीन वटा विज्ञापन पनि साइन गरँे । नयाँ फिल्म ‘क्याप्टेन’ आउँदैछ । त्यसलगत्तै ‘ए मेरो हजुर ३’ को सुट छ । मिलन चाम्सको ‘ब्याचलर बन्टी’ पनि प्लानिङमै छ ।
कर भनेको तिर्नुपर्ने चिज नै हो । राज्यले कसैलाई पनि त्यत्तिकै छोड्दैन । सायद निर्माताहरुले पनि तिरिरहनु नै भएको छ । मलाई फेरि, यो कर भनेको फोटो खिचेर पब्लिसिटी गर्नु पर्ने चिज हो जस्तो पनि लाग्दैन । यो मान्छेको सामान्य र अनिवार्य दायित्व नै हो ।
‘वान लाइन’मा त जसले पनि राम्ररी नै सुनाउँछ । पूरै पढेपछि हो झुर लाग्ने । म विशेषगरी क्यारेक्टर र फिल्मभित्रका डायलगमा ध्यान दिन्छु । मैले सुरुसुरुको फिल्म गर्दा आफ्नो क्यारेक्टरमा फरकपन दिने चाहना नराखेकै हो । प्रियंका चोपडाले पनि सुरुमै ‘मेरी कोम’ अर्थात् सलमान खानले सुरुमै ‘बजरंगी भाइजान’जस्तो फिल्म गरेको भए सायद आजजस्तो चर्चा हुँदैनथ्यो होला । त्यसैले पहिला आफूलाई चिनाउने हो, त्यसपछि मात्र एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छु ।